Ososayensi baye bakhula izinhlobo eziningana zebhanana ezingasiza izingane eziningi e-Uganda ezibhekene nokuntuleka kwe-provitamin A. I-bananas okuthiwa "igolide" yasungulwa iqembu elivela eNyuvesi yaseQueensland e-Australia ngaphansi koProfesa James Dale. Imiphumela yalo msebenzi yabonakala encwadini ethi Plant Biotechnology.
Ngethemba ukuthi ngo-2021 abalimi base-Uganda bazobe sebekhula kakade ubhanana abacebile ku-provitamin A. Lolu cwaningo lwaluxhaswa yiBill noMelinda Gates Foundation, okwenzela abacwaningi imali engaba ngu-R10 million.
Ukuthuthukiswa kwezinhlobonhlobo ezintsha
Inqubo yokwakha izinhlobo ezihlukahlukene zebhanana ihilela ukuguqulwa kwamangqamuzana abo ngabanye, aguqulwa abe imibungu bese ehluma ezitshalweni. Ukuze kuthuthukiswe ubhanana "begolide", eminyakeni engaphezu kwengu-12 yokucwaninga kwelabhutrikhi nokuhlolwa kwendawo enyakatho yeQueensland kwakudingeka. Ososayensi base-Uganda manje baphinde baphendule inqubo efanayo ngezinhlobo zendawo zobhanana.
Ukuze bathole izinhlobo ezihlukahlukene, ososayensi bathatha igesi kusuka ebhanini ekhulile ePapua New Guinea. Izithelo zalezi zinhlobonhlobo zisezingeni eliphakeme kakhulu le-provitamin A, kodwa zincane. Lezi zakhi zofuzo zafakwa kwi-genotype yezinhlobonhlobo zebhanana "ezihlasele". Sekuyiminyaka eminingi yokusebenza, ososayensi bakwazi ukuthola izithelo ezinkulu ngezinga eliphezulu le-provitamin A. Ngaphandle, bangakwazi ukuhlukaniswa nabanye ngokuphambene negolide, njengokunye kwezinye izinhlobo ezinombala we-cream.
Ukuntuleka kwe-provitamin A
Emiphakathini yasemaphandleni yase-Uganda, ubhanana namanje kukhona ukudla okuyisisekelo. Lapha, abantu badla ibhanana e-East African culinary enezinga eliphezulu le-starch, kodwa linamacronutrients amancane kakhulu, kufaka phakathi i-provitamin A ne-iron.
Njalo ngonyaka kusukela ekulahlekeni kwalesi provitamin, kusukela ku-650 kuya ku-700 000 izingane emhlabeni jikelele ziyafa. Ezinye izingane zilahlekelwa amehlo. Ezinye izimpawu zingase zihlanganise ukukhula okuncane, ukungabi nabantwana, isikhumba esomile nokunye okuningi.
Ukuqala kwezilingo zasendle e-Uganda
Ngakho leli bhanana "legolide" lingasetshenziswa ngokumangalisayo. Ososayensi baye bazama ukuhlukahluka kwezakhi zofuzo ngaphambi kokuthuthukisa "iresiphi" yokugcina. Izibhamu eziqukethe izakhi zofuzo ezidingekayo zithunyelwa e-Uganda, lapho zatholwa khona kwi-genotype yezinhlobo zebhanana zendawo yokuhlolwa kwensimu.
Ukuphumelela kwale miphumela, kanye nokushicilelwa kwabo, kuyisenzakalo esibaluleke kakhulu emizamweni yabo yokuhlinzeka ngokudla okungcono okunomsoco emiphakathini empofu ehlala e-Afrika.
Ikhaya iwayini: esihlwabusayo futhi unempilo. Ukupheka iwayini ejikijolweni
Eyiphutha ezinhlanu ezivame kakhulu ezihlobene ukubhuloga futhi ukubhuloga
Action: umamukeli exchange of "Tricolor". Izici nemibandela iqhaza